Ngaba Ijusi kufanelekile ukuCudisa? | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 30, 2009 NgeCawa, Agasti 23, 2009 UChris Lucas
Ukuba awuvanga malunga ne-Horizon Realty yenza uphando ngokukhawuleza kuGoogle kwaye uya kufumana amanqaku ambalwa anomdla, njengale post Mashable. Ukufumana imvelaphi ekhawulezileyo, umntu owayesakuba ngumqeshi wabo, u-Amanda Bonnen, wathumela i-tweet malunga uhlala kwisikhunta kwenye yeyunithi yazo. Horizon ifayilishe ityala le- $ 50,000 ngokuchasene noNks Bonnen. Ngoku iinyani ezingaphezulu ziya kuvela, kodwa kukho isifundo esikhudlwana ekufuneka sifundwe apha kwaye ayisiyiyo kuphela ukuba iMithombo yeendaba yezeNtlalontle ingabuya ikulume.
Isifundo 1: Yazi ukuba ngubani onamandla
Xa ungena kumhlaba ongaqinisekanga, nokuba ngamajelo eendaba ezentlalo, iibhlog, okanye imithombo yeendaba ngokwesiko, kubalulekile ukuba uqonde ukuba ngubani kanye kanye onamandla. Namhlanje ukutshintsha kwamandla kubonakala ngokucacileyo kodwa ayinguye wonke umntu owufumanayo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ngaphambi kokuba ulwe esidlangalaleni, nokuba ucinga ukuba ulungile, uyayiqonda indlela iminyhadala enokuthi idlale ngayo. Eyona nto inokwenzeka, ngaphandle kwento ocinga ngayo, awuwabanga onke amakhadi.
Isifundo 2: Musa ukuzisa imela xa kudutyulwa
Qinisekisa ukuba ukuba uza kukhupha isihloko esibandakanya imidiya yoluntu, uyayiqonda imithombo yeendaba. Qinisekisa ukuba ukulungele ukusebenzisa indlela ekuxoxwa ngayo kwinzuzo yakho. Ngaphandle koko xa utsala imela kunye nomchasi wakho, okwenyani okanye akunjalo, ukhupha umpu uya kuba lidada elihleliyo.
Njengoko isithuba seMashable siyibeka ngokufanelekileyo:
Siqinisekile ukuba i-Horizon Realty ilahlekelwe kakhulu ngaphezulu kwe- $ 50,000 kule Twitter. Yiloo nto oyifumanayo xa ukhupha iikowuti? Senza isimangalo kuqala, sibuze imibuzo kamva luhlobo lombutho.
Isifundo 3: Fumana isiluleko esifanelekileyo
Andithethi nganto ingcebiso kwezomthetho. Kubaluleke kakhulu kule mihla yobudala ukuba ube nomntu onokujika ubuze kuye, "yintoni ekufuneka ndiyazi". Kwimibutho emikhulu kubalulekile ukuba uneentengiso kunye neqela le-PR etafileni. Kwimibutho emincinci isenokuba umcebisi kwimidiya yoluntu, iqabane, okanye nomsebenzi wakho wasehlotyeni. Nokuba ungubani na, qiniseka ukuba ufumana ukuqonda okuyinyani kwinto enokwenzeka, indlela omele uphendule ngayo, kwaye ziziphi iziphumo ezinokubakho.
Unxibelelwano luyatshintsha. Kungenzeka ukuba libali elincinci lendawo kwiminyaka embalwa edlulileyo linokuba kukutya kwesizwe namhlanje. Qiniseka ukuba unokuqonda okupheleleyo malunga nendlela ebonakala ngayo ngaphambi kokuya kwidabi lobudlelwane noluntu.
UChris nguSekela Mongameli woPhuhliso lweShishini IFomstack. Ulawula uninzi lweenzame zokuthengisa zeFormstack ngomdla okhethekileyo ekufumaneni ukuba intengiso yentlalo kunye ne-Intanethi inokunceda njani iFomstack ukuba ikhule. IFomstack sisixhobo sokwakha ifom ye-intanethi esithatha uninzi lwentloko ngaphandle kokuqokelela kunye nokulawula idatha kwi-intanethi.
Omnye umzekelo wakutshanje kolu tshintsho yi-United Airlines evuthela imvumi uDave Carroll emva kokophula ikatala yakhe ebiza kakhulu. Ividiyo yakhe, "i-United Breaks Guitars" yakhawuleza yaya kwintsholongwane kwaye-ngelixa i-180M yeedola kwixabiso le-United inokugqitha-indleko ye-United ngokulingana kwegama elithile.